Ahoana no misafidy araka ny tokony centrifugal dipoavatra fanamainana? - China Changzhou Daming fanafody Fitaovana
Ahoana no misafidy araka ny tokony centrifugal dipoavatra fanamainana?
Na iza na iza no nampiasa fitaovana izany dia tsy maintsy fantatrareo fa centrifugal dipoavatra fanamainana dia afaka mitana anjara asa mahery vaika eo amin'ny asa,-paharitry ny tahan'ny tena fifadian-kanina, ary ihany koa dia afaka manome antoka ny kalitaon'ny vokatra, matetika ampiasaina ao amin'ny zava-mahadomelina mora hafanana paharitry fitsaboana. Ankoatra izany, ny dipoavatra fanamainana Azo ampiasaina mba hanomana microcapsules, ary mety hahatratra ny fitsaboana tsara vokany. Koa ahoana no misafidy?
Voalohany indrindra, rehefa manao safidy, Zui foana mampitaha ny maro samy hafa karazana fitaovana. Zava-dehibe ny mitandrina ao an-tsaina fa tokony hifidy ireo fitaovana izay ilainao, izay marefo kokoa eo amin'ny rafitra, ary mila toerana malalaka ho an'ny tsy mitovy asa.
Ny olana faharoa, raha miantsena isika ho an'ny dipoavatra dryers, dia ny Zui dia tsara mitady fitaovana izay mandeha ho azy sy mora kokoa ny mifehy. Amin'izany fomba izany, dia ho mora kokoa ny mety sy tsotra miasa, izay afaka mampihena ny isan'ny mpandraharaha sy hamonjy ny vola lany.
Fahatelo, tokony hisafidy ny fitaovana azo antoka sy mafy orina amin'ny fampisehoana, tsy angovo sy fahombiazana kokoa, ka dia afaka manampy tsara kokoa antsika hamita ny asa.
Fahefatra, mpampiasa dia tokony hanazava ny tena aloha fepetra, ary koa ny manokana sy ny ara-nofo fananana fitaovana, ary azo antoka fa ny haben'ny ny nozzle ny fitaovana voafantina mahafeno ny fepetra takina. Izany hoe, dia tokony hifidy ny dipoavatra fitaovana fanamainana izay afaka manampy antsika hamita ny asa tsara.
Na izany aza, na dia ny fitaovana dia mety voafantina, dia mety hisy olana sasany ao amin'ny tena fampiharana. Amin'izao fotoana izao, dia mila mandinika ny toe-javatra raha ny dipoavatra fanamainana manam-olana, toy ny sakafo na ny hafainganam-pandehany, hafanana sehatra Ara-dalàna, ary ny toetoetry ny ara-nofo mihitsy, sns, ary avy eo indray zatra izany
Post fotoana: Aug-08-2018
TSIA. 10, FAMPANDROSOANA ZONE, ZHONGJIANG, ZHENGLU TANANA, TIANNING distrika, Changzhou, Jiangsu Province, CHINE.
Ahoana no mifidy centrifugal dipoavatra fanamainana Kor ...